CyberLink PowerDVD12 Ultra ....! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ CyberLink PowerDVD12 Ultra လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Update လေးပါပဲ...! လိုင်စင်ဗားရှင်းဖြစ်အောင် Crack ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!အောင်အောင် သေချာသုံးပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ...!အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! 3D မျက်မှန်ရှိရင် 3D ပါ ကြည့်လို့ရတယ်နော်...!
မှတ်ချက်။ ။Con ဖြုတ်ပြီးမှ install လုပ်ပေးပါ...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 112 MB ပဲရှိပါတယ်...!အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "CyberLink PowerDVD12 Ultra ....!"